पशुपति प्रसाद जस्तो फिल्म हामीले कहिले हेर्न पाउने ? | Ratopati
personकुवेर गिरी exploreकाठमाडौं access_timeजेठ ९, २०७६ chat_bubble_outline0
निर्देशक दीपेन्द्र के खनाललाई विगत ४ वर्षदेखि देश तथा विदेशबाट धेरै सोधिने प्रश्न हो यो । फोन, सामाजिक सञ्जाल होस् वा कम्युनिकेसनका अन्य माध्यमबाटै किन नहोस्, धेरैले उनलाई यही प्रश्न राख्ने गर्छन् । त्यति मात्र कहाँ हो र ? उनी जहाँ पुग्छन् । त्यहाँ कसै न कसैले उनलाई यो प्रश्न तेस्र्याएकै हुन्छ ।
अब भने उनले यो प्रश्नको सामना गर्नु नपर्ने भएको छ । कारण, उनले ‘पशुपति प्रसाद’झँै उत्कृष्ट फिल्म बनाउन सुरु गरेका छन् । केही पहिले राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच घोषणा भएको फिल्म ‘आमा’ ‘पशुपति प्रसाद’ भन्दा उत्कृष्ट फिल्म बन्ने दाबी उनले गरे ।
‘पशुपति प्रसाद’झैँ उत्कृष्ट फिल्म हामीले कहिले हेर्न पाउने । चारैतिरबाट आएको यो प्रश्नले म हैरान भइसकेको थिएँ’, निर्देशक दीपेन्द्रले भने ‘त्यसको जवाफ अब बन्ने ‘आमा’ फिल्मले दिन्छ ।’
यो प्रश्नलाई दीपेन्द्रले नराम्रो रूपमा पनि लिएको भने रहेन छन् । ‘प्रश्न मैले अन्य पनि उत्कृष्ट फिल्म दिन सक्छ र दिन्छ भन्ने विश्वास भएका दर्शकको हो’, उनले थपे ।
‘आमा’ भारी शब्द
‘आमा’ नामबाट बन्ने फिल्म दीपेन्द्रको तेस्रो हो । यस अगाडि नेपालमा बनेको पहिलो फिल्मको नाम ‘आमा’ राखिएको थियो । हीरासिंह खत्रीले वि.सं. २०२० मा यो फिल्म बनाएका थिए । त्यसपछि २०५१ रेसराज आचार्यले ‘आमा’ निर्माण गरेका थिए ।
‘आमा’ नामबाट आफूले बनाउन लागेको फिल्म तेस्रो भएको आफूलाई थाहा नभएको दीपेनन्द्रले बताए । ‘आमा बन्न लागेको यो तेस्रो पटक भन्ने मलाई थाहा थिएन । पहिलो बनेको थाहा थियो । बीचमा पनि बनेको रहेछ’, दीपेन्द्र भने ‘मैले पहिला बनिसकेको फिल्म र नाम भनेर आमा राखेको पक्कै पनि होइन । फिल्मको लेखन पनि मैले गरेको हो । जब मैले फिल्मको लेखन गर्दै गएँ । सकिने बेला फिल्मको नाम आमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो’, शीर्षक जुरेको विषयमा उनले सुनाए ।
उनले फिल्मको कथामा आमाको जीवनकथा र आमाको भोगाइ समेटेका छन् । जुन चरित्रको मुख्य कथा हो । त्यही नाम उपयुक्त हुने ठानेर उनले फिल्मको नाम आमा राखेका हुन् । ‘आमा’ भन्ने एकदमै भारी शब्द हो । यो उनले बुझको पनि छन् । ‘त्यहीअनुसार फिल्म बनाउन आफू कटिबद्ध रहेको उनले बताए ।
प्रयोग धेरै छन्
दीपेन्द्रले सुरुमा बनेको ‘आमा’ हेरेको छन् । त्यसैले उनी आफूले हेरेको आमा र बनाउन लागेको आमामा कथा आकाश जमिनको फरक रहेको बताउँछन् । उनले यसरी बुझाए ‘समयअनुसार सबै कुरा परिवर्तन भइरहन्छ । पहिले बनेका फिल्ममा आमाका कुरा, दुःख एक प्रकारको थियो । अहिले बनाउन लागेको आमाको दुःख अर्कै छ ।’
उनले फिल्ममा अहिलेको आमाको कथा लिएका छन् । पहिले बनेको आमाको कथामा यसको विषय कहीँ कतै टच नहुने उनले खुलाए । शीर्षकअनुसार फिल्मको कथावस्तु र पटकथा पनि उनले एकदमै बलियो बनाएका छन् ।
पशुपति प्रसाद बनेको ४ वर्ष हुन लाग्यो । ४ वर्ष अगाडि र ४ वर्ष पछाडि निर्देशकमा पनि ग्रोथ हुनुपर्यो । त्यो बेलाको भन्दा अहिले अझै राम्रो चलचित्र बन्नुपर्छ उनको विचार हो । किनभने ४ वर्षमा पहिलेका कमीकमजोरी केलाएर । सो समय गर्न नसकेको कुरा अहिले उनी गर्न खोज्दैछन् । ‘आमा अझै बलियो चलचित्र बनाउँछु र बन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु’, उनले सजिलै भने ।
आमा शब्दलाई बोकेर हिँड्न सक्ने क्षमता स्क्रिप्टमा भएको उनलाई लागेको छ । त्यसैले अहिले धेरै कुरा भन्ने वा खोल्ने पक्षमा उनी छैनन् किनभने फिल्म मेकरले आफ्नो फिल्म आउनु अगाडि धेरै कुरा भनिरहेका हुन्छन् र पछि फिल्म आएपछि बिर्सिसकेका हुन्छन् । उनी यो वर्गमा पर्न चाहँदैनन् । ‘म यो पटक फिल्म निर्माणमा पहिले धेरै कुरा भन्दिनँ किनभने यो फिल्ममा मैले प्रयोग गर्न खोजेको धेरै कुराहरु छन् । त्यो फिल्म आएपछि थाहा हुनेछ’, उनी गम्भीर हुँदै भने ‘अहिले भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ ।’
गौरव गर्ने फिल्म बनाउँछु
फिल्म बनाउने मात्र होइन । अरूको प्रायः सबै फिल्म पनि हेर्छन्, दीपेन्द्र समीक्षा पनि भ्याएसम्म सबै पढ्छन् । समीक्षकले नेपाली फिल्ममा यो भएन, त्यो भएन भनेको र हलमा दर्शकले फिल्मका बारेमा गरेको गुनासो सबै थाहा छ उनलाई ।
फिल्म ‘आमा’ सुनिदै आएका सबै गुनासो सम्बोधन गर्ने र दृश्य भाषा नै अलग मेकिङ गर्ने हिसाबले उनले बनाउन लागेका हुन् । सायद त्यसैले होला फिल्म पनि उनी आफैले खिच्दै छन् । आफ्नो फिल्ममा छायाकारको पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न लागेको उनले यो पहिलो होइन । यस अगाडि ‘धनपति’ भन्ने फिल्ममा उनले छायाङ्कनको पाटो परीक्षण गरेका थिए । सो समय उनको छायाङ्कनको पनि तारिफ भएको थियो । ‘आफ्नै छायाङ्कन र निर्देशनमा ‘आमा’ भन्ने फिल्म क्षेत्र र देशले गौरव गर्ने फिल्म बनाउँछु ।
निर्देशक पोख्त हुनुपर्छ
आमा आफैले छायाङ्कन गर्न लाग्नुभएको छ । जोखिम मोले जस्तो लाग्दै ?
जोखिम लाग्दैन । विश्वका ठूला ठूला फिल्म निर्देशकले पनि आफै छायाकार भएर फिल्म बनाएका छन् । यस वर्ष अस्करमा पुगेको ‘रोमा’ भन्ने फिल्म पनि निर्देशक आफैले खिचेका थिए । त्यसको लेखक पनि उनी आफै थिएँ, दीपेन्द्रले उदाहरण दिए ‘विदेशमा छायाङ्कन पनि निर्देशक आफैले गरिरहेका हुन्छन् ।’ छायाङ्कन, लेखन र सम्पादन पनि निर्देशकले जान्नुपर्ने विधा रहेको उनको भनाइ रहेको छ । ‘कहिले काहीँ ओभर लोड हुन्छ भनेर गरिँदैन । निर्देशक यी सबै विधामा पोख्त हुनुपर्छ’, उनी फेरि बोले ।
उनले बनाएको सबै फिल्मले चर्चा बटुलेका छन् । त्योमध्ये पशुपति प्रसाद चारैतिरबाट चर्चा र प्रसंशा भएको फिल्म हो । अहिले बनाउन लागेको ‘आमा’ त्योभन्दा पनि माथि बनाउने उनको सोच रहेको छ ।
अहिले फिल्म व्यवसाय छैन । यसको दोष उनी कसैलाई दिँदैन । यसको पूर्ण दोषी फिल्मकर्मी देख्छन् उनी । ‘हामीले नै राम्रो फिल्म चलचित्र बनाउन नसकेको हो । यसलाई सबैले एक्सेफ्ट गर्नुपर्छ’, उनले थपे ‘हामीले कसरी राम्रो चलचित्र बनाउने, कसरी अध्ययनशील हुनेतिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।’
बजारमुखी फिल्म गर्दिनँ
पशुपति पछि तुरुन्तै अर्काे त्यस्तो फिल्म नबनाएर दीपेन्द्र किन ग्याप रहे ? आम मानिसको प्रश्न हो यो । ‘पशुपति प्रसाद’ पछि ‘धनपति’ गरे । यो बीचमा एक दुईवटा व्यावसायिक फिल्म गरे’ उनी ती दिनमा फर्किए ‘बजार मुखी फिल्म गर्नुपर्छ । यसमा आफ्नो बाध्यता थियो ।’
दर्शकलाई मात्र होइन आफूलाई पनि राम्रो फिल्मको प्यास लाग्दो रहेछ । लागेको कुरा गर्न मन लाग्दो रहेछ’ उनी भन्दै थिए ‘यस पटक आमा ऐतिहासिक बनाउँछु । अब कर्मसियल भनेर बजारमुखी फिल्म कहिल्यै गर्दिनँ ।’
अरूको पछि लाग्ने धेरै
अहिले चलचित्रकर्मीहरुलाई कमेडीको ह्याङ छ । यो उनले पनि झेलेकै विषय हो । सबैलाई ‘छक्का पन्जा’को जसरी एकै चोटि पैसा कमाउनु छ । त्यसैले अहिले धेरै फिल्म तथा त्यसका मेकर त्यसको पछाड दौडिरहेका छन् ।
यो गलत भएको उनी बताउँछन् । ‘यो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । सबैको आआफ्नै विशेषता हुन्छन् । ‘छक्का पन्जा’को एक किसिमको होला । अर्काेको अर्कै हुन्छ’, उनले भने ‘आफ्नो जेमा दखल छ, सबैले त्यो काम गर्नु पर्यो ।’ अरूको नक्कल गरेर पछि लागे बिग्रने र आफ्नो विशेषताअनुसार अध्ययनशील र लगनशील भएर फिल्म बनाए चल्ने र त्यसले दर्शक पनि पाउने उनको तर्क छ ।
स्टारका फिल्म पछारिए
यो वर्ष चलेका र स्टार भनिएका कलाकारका फिल्म व्यावसायमा पछारिएका छन् । बलिउडको कुरा गर्ने हो भने त्यस्तै छ । तीन स्टार खानका फिल्म पनि नचलेको अवस्था छ । तर त्यहाँ सानो सानो बजेटमा बनेको फिल्म कन्टेन्टका कारणले राम्रो भएका छन् ।
दीपेन्द्र पनि स्टारभन्दा पनि कन्टेन्टको पछि लाग्ने निर्देशक हुन् । उनी अन्य निर्मातालाई पनि बलिउडबाट सिक्न सुझाउँछन् । ‘अहिले कथित स्टार साँच्चिकै स्टार भएका भए फ्यान फ्लोइङको आधारमा एक दुई दिन हल भरिनु पर्ने हो ? उनले भने ‘त्यसमा फिल्म पनि राम्रो भइदिए बिजनेस पनि धेरै गर्न सक्थ्यो ।’
किन फिल्म चलेन ? किन दर्शक आएनन् ? भन्ने विषय गम्भीर विषय हो । यसतर्फ कसैले ध्यान दिएको पाएका छैनन् । स्टार हुँदैमा र फिल्म बन्दैमा चल्दैन भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी रहेको उनी सुनाउँछन् ।